Chantal, 16 taona…Mampianatra “maquillage”
Hatramin’ny fotoana nanaovany fampisehoana no nanombohan’i Chantal nianatra “maquillage”
Chantal: Nampiana-tena momba ny maquillage ary mizara koa
Hatramin’ny fotoana nanaovany fampisehoana no nanombohan’i Chantal nianatra “maquillage” ho an’ny tenany. Indraindray mantsy lavitra be ilay toerana hanatanterahina izany fampisehoana izany ka tsy misy olona afaka hanao ilay “maquillage” ho entiny an-tsehatra.
Bodo : Hizara “couette” ho an’ireo zokiolona
Taorian’ireo hetsika fanangonam-bola sy fampisehoana am-pifandraisan-davitra nokarakarain’i Bodo, dia fantatra izao fa hiroso amin’ny asa soa avy hatrany ny tenany. Efa voavidy soa aman-tsara ireo lamba firakotra mafana na ny “couette” hoy i Bodo,
JODI Solo 4 : Nivoaka omaly ireo horonantsary fohy
Na dia eo aza ny fihibohana dia tsy nijanona tamin'ny fandrisihana ireo tanora haneho hevitra ny AAENA Madagascar ao anatin'ilay tetikasa "Manana hevitra ny tanora na les Jeunes Ont Des Idées - JODI Solo".
PAYSAGISTE :asa toy asa rehetra ihany!
Maro amintsika no mieritreritra fa natokana ho an’ny vehivavy irery ihany ny fikarakarana indrindra fa ny resaka fikolokoloana ny zaridaina sy ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny.
Mpandihy : Asa mahavelona tsara
Anisan’ny fampihetseham-batana azon’ny olon-drehetra hatao ny dihy. Eto amintsika dia tontolo iray tena mahafinaritra ny tanora izy io ary misy mihitsy ireo mandalina azy manokana. Iray amin’ireo i Nilaina. Mitantara ny manodidina izany ny tovolahy, mpandihy iray ao amin’ny “Dihvin”.
« Pyrograveur professionnel » na mpanao paikafo
Tafiditra ao anatin’ny tontolon’ny haikanto ny fanaovana paikafo. Olona iray anisan’ny manana ny mampiavaka azy no sady manana ny maha izy azy eo amin’ity sehatra i A.S